Hollywood - Setopati | Setopati Kala - Nepal's Digital Newspaper
एजेन्सी - फिल्म प्रदर्शकहरूले नागरिकहरूको आधारभूत अधिकारहरू: वाक स्वतन्त्रता, मानवप्रतिको सम्मान र त्यसको अन्य कुनै विकल्प नरहेको जनाउ दिन फिल्म प्रदर्शन गरिएको बताएका छन्।
एजेन्सी - 'स्काइफल' पछि थप बोन्ड सिरिजका फिल्ममा नदेखिने बताएका ड्यानियल क्रेग अन्तिम पटकका लागि पुन: जेम्स बोन्ड बन्ने सम्भावना रहेको खुलासा भएको छ। ब्रिटिस जासुसी एक्सन फ्रान्चाइज श्रृखंलाका निर्माता बारबरा ब्रोकोलीले क्रेगलाई थप एक बोन्ड फिल्म गर्न राजी बनाएको पश्चिमी फिल्म संचारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेपछि यस्तो खबर बाहिरिएको हो।
एजेन्सी - प्रियंका दोस्रो स्थानमा रहँदा उनले हलिउड सुन्दरीहरू एन्जोलिना जोली, एमा वाट्सन, मिसेल ओबामा तथा गिगी हाडिस लगायतकालाई पछाडी पारिन्।
एजेन्सी - हलिउड अभिनेताद्वय भीन डिजेल र डायन जोनशन 'द रक'को विवाद सतहमा आएको छ। उनीहरू अभिनित एक्सन फिल्म श्रृखंला 'द फेट अफ फ्यूरियस'को प्रचार सँगै नगर्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि उनीहरूको विवाद र टकराव छताछुल्ल भएको हो।
एजेन्सी - फिल्मकार रिचार्ड कर्टिसले सन् २००३ मा रिलिज भएको फिल्म 'लभ एक्चुल्ली' अभिनेत्री कायरा नाइटलीलाई सुपरहिट फ्यान्टासी फिल्म सिरिज 'पाइरेटस अफ द क्यारेवियन' फिल्म खत्तम हुनेछ भनेर सोच्ने गरेको खुलासा गरेका छन्।
यस्तो बन्यो 'स्पाइडरम्यान: होमकमिङ'को ट्रेलर
एजेन्सी - फिल्ममा स्टाइडरम्यानसँगै अर्का सुपरहिरो 'आइरनम्यान' पनि देखिएका छन्। झण्डै साढे दुई सेकेन्ड लामो ट्रेलर नयाँ स्पाइडरम्यान बनेका टम होल्यान्ड तथा रोबर्ट डाउनी जुनियरमाथी केन्द्रित छन्। यस पटक फिल्ममा स्पाइडरम्यानले 'भल्चर' नामक दुश्मनसँग लड्नेछ।
'मिसन इम्पोसिबल ६'का लागि १ वर्षदेखि तालिममा टम क्रुज
एजेन्सी - 'हामी रोमाञ्चित छौ। किस्टोफर म्याक्वायर फेरी फर्किसकेका छन्। फिल्मको लेखन र निर्देशन निसन्देह उनले ने गर्नेछन्। आगामी फिल्म टमले यसअघिका फिल्म भन्दा भव्य एक्शन गर्नेछन्। त्यसले यसअघिका सम्पूर्ण एक्शन दृश्यलाई पछाडी पार्नेछ। उनी रोग नेशन देखी यसकै तयारीमा छन्। फिल्मले सबको होस उडाउनेछ' निर्माता इलिसनले भने।
के दीपिका भीन डीजेलसँग अर्को फिल्म गर्दैछिन्?
एजेन्सी - हाल बलिउड फिल्म 'पद्मावती'को छायाँकनमा व्यस्त रहेकी दीपिका हलिउड करियरका लागि डिजलको भर परेको खबर सार्वजनिक भएको छ। फिल्मको प्रचारका दौरान भारतमा जता जाँदा नि दीपिकाले नछोड्नुलाई दीपिकाको हलिउडमा स्थापित हुने चाहनाको प्रस्तुतिका रूपमा अर्थ्याएका छन्।
हलिउड सुपरहिरो फिल्ममा हुँदैछ पहिलो पटक यस्तो!
एजेन्सी - सुपरहिरोमा आधारित फिल्म हलिउडको मेरूदण्ड हो। हलिउड फिल्मको कारोबारको ठूला हिस्सामा उनीहरूको आधिपत्यता छ। संसारको फिल्म बजारमा हलिउडको प्रभाव बढाउन पनि यिनै जिम्मेवार छन्। अब हलिउड सुपरहिरो फिल्मको लिगेसीमा एउटा अध्याय थपिने भएको छ।
फेरि 'द म्याट्रिक्स' बन्दै, फिल्ममा कानु हुनेमा अन्योल
एजेन्सी - यस अघिका दुई सिक्वलको लेखन र निर्देशन सम्हालेका वाचोस्की दिदीबहिनी भने नयाँ 'म्याट्रिक्स'मा हुने छैनन्। त्यसैगरी फिल्ममा मुख्य अभिनेताका रूपमा काम गरेका कानु रिभ पनि फिल्म हुने-नहुने निक्यौल हुन बाँकी छ।
'गार्डियन्स अफ ग्यालेक्सी ३' बन्ने पक्का
एजेन्सी - 'म मेरो जीवनको आगामी ३ वर्ष के हुन चाहन्छु सोचिरहेको छु। तपाईंहरूलाई थाहा होला म अर्को ठूलो फिल्म गर्न गइरहेको छु र त्यो गार्डियन्स वा अन्य केही हुनसक्छ? म केही साता भित्र नै त्यसको बारेमा निश्चित हुनेछु', उनले थपे।
'द गर्ल इन द स्पाइडर्स वेब'बाट पर्दामा फेरी आउँदै लिजबेथ स्लान्डर
एजेन्सी - फिल्ममा लिजबेथ स्लान्डरको भूमिकामा नाओमी र्‍यापेसको मुख्य अभिनेत्रीका रूपमा रहनेछिन्। यस अघिका ३ श्रृखंलामा पनि उनी शीर्ष भूमिकामा देखिएकी थिइन्। सिक्वलमा उनी हुने पक्का भएपनि ड्यानियल ग्रेग तथा रोनी मारा भने हुने छैनन्।
फ्यानलाई हार्ट एट्याक भएपछि गायिकाले गरिन् यस्तो
एजेन्सी - ग्रामी अवार्ड विजेता गायिका एडेलले आफ्नो कन्सर्टका दौरान कार्यक्रम हेर्न उपस्थित एक प्रशंसकलाई हृदयघात भएपछि जारी कन्सर्ट रोकेकी छन्। शुक्रबार राती सिड्नीमा भएको कार्यक्रमका बिच ४७ वर्षे एक महिलालाई हृदयघात भएपछि उनले त्यस्तो गरेकी हुन्।
ट्रेलरमा हेर्नुस् एडगर राइटको एक्सनप्याक 'बेबी ड्राईभर'
'द वर्ल्डस् एन्ड'को चार वर्षपछि मास्टर निर्देशक एडगर राइट 'बेबी' ड्राईभर' फिल्म लिएर फर्किएका छन्। फिल्ममा एनसेल एल्गर्ट शीर्ष भूमिकामा रहेका छन्। उनका अलावा एक्सनप्याक थ्रिलर फिल्ममा केभिन स्पेसी, जोन हम तथा नेमी फक्सको अभिनयब रहेको छ।
'द पोस्ट'का लागि स्पिलवर्गले गरे टम ह्याङ्क्स तथा स्ट्रिपसँग टिमअप
टम र स्ट्रिपले फिल्ममा क्रमश: वासिङटन पोस्टका सम्पादक बेन ब्राडली तथा प्रकाशक के ग्राह्मको भूमिका निर्वाह गर्नेछन्। फिल्ममा भियतनाम युद्धताका अमेरीकी रक्षा मन्त्रालयको तात्कालिन जोनसन प्रशासनले कसरी युद्धलाई गलतढंगले प्रायोजित गर्यो भन्ने कथा रहनेछ।
फरारी कार निर्माताको वायोपिकमा क्रिश्चियन बेलको सट्टा ज्याकम्यान
एजेन्सी - ज्याकम्यानले अर्का हलिउड अभिनेता क्रिश्चियन बेललाई पाखा लगाउँदै प्रतिक्षित मानिएको फरारीका गाडीका निर्माता इन्जो फरारीको वायोपिक फिल्ममा शीर्ष भूमिका पाएका छन्। फिल्ममा नाओमी र्‍यापेसले उनको पत्नीको भूमिका निभाउने छिन्।
दोस्रो ट्रेलरमा झन यस्तो एक्शनमय देखियो 'द फेट अफ फ्यूरियस'
एजेन्सी - चर्चित हलिउड एक्सन फ्रान्चाइज 'फास्ट एण्ड फ्यूरियस'को आठौं श्रृखंलाले आफ्नो दोस्रो ट्रेलर रिलिज गरेको छ। सार्वजनिक भएको 'द फेट अफ फ्यूरियस'को ट्रेलरले फिल्म झन बढि एक्शनमय भएको देखाएको छ।
स्कारलेटले मागिन् पतिसँग 'डिभोर्स'
एजेन्सी - रोमेनका वकीलले यसको पुष्टि गरेको एपीले जनाएको छ। जोनशनले मंगलवार न्यू योर्क सिटी कोर्टमा सम्बन्धविच्छेदको याचिका दायर गरेकी हुन्। जनवरीमा उनीहरू छुट्टिन लागेको खबर सार्वजनिक भएको थियो।
'डिभोर्स'को दुई वर्षपछि बेन र जेनिफर फेरी सँगै हुने तयारीमा
एजेन्सी - पिपल पत्रिकाले गार्नर निकट श्रोतको हवाला दिदैं जेनले सम्बन्धविच्छेद स्थगीत गरेको जनाएको छ। गार्नर फेरी बेनसँग पुराना कुराहरूमा बिर्सदैं साथ हुन चाहेको उल्लेख गरेको छ। उनीहरूले एकअर्कालाई फेरी मौका दिन चाहेको लेखेको छ।
२० वर्ष बितिसक्यो तर अझै यस कुरामा पछुतो छ आर्नोल्डलाई
एजेन्सी - 'कुनै परिवर्तन ल्याउँदै भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि पटक पटक यस बारेमा सोच्छु र आफूलाई आफूले सकेजति पिट्छु। त्यसैले मुख्य कुरा भनेको कसरी त्यसबाट अगाडी बढ्ने भन्ने हो। तपाईंका बच्चासँग राम्रो सम्बन्ध कसरी राख्ने भन्ने मलाई भइरहन्छ', आर्नोल्डले दु:ख पोखे।
नाटकीय रुपमा ‘मुनलाइट’ ओस्कार अवार्ड जित्न सफल (हेर्नुस् ओस्कार अवार्ड विजेताको सूची)
काठमाडौं, फागुन १६ (सेतोपाटी) - यस वर्षको ओस्कार अवार्डको सर्वोत्कृष्ट फिल्मबाट ‘मुनलाइट’ सम्मानित भएको छ। सोमबार विहान अमेरिकाको क्यालिफोर्नियास्थित लस एञ्जलसको डल्बी थिएटरमा भएको कार्यक्रममा म्युजिकल फिल्म ‘ला ला ल्यान्ड’ लाई उछिन्दै नाटकीय रुपमा ‘मुनलाइट’ लाई ८९ औं संस्करणको ओस्कार अवार्डबाट सम्मानित गरियो।
ओस्कारमा 'मुनलाइट' सर्वोत्कृष्ट फिल्म, कसले कुन-कुन अवार्ड जिते?
एजेन्सी , काठमाडौं, फागुन १६ - उद्‍घोषकले पहिले देखि नै चर्चामा रहेको लाला ल्याण्डले सर्वोत्कृष्ट चलचित्रको अवार्ड जितेको घोषणा गरेका थिए। तर, केहीबेरमा नै आयोजकले गल्तीका कारण यस्तो घोषणा भएको भन्दै 'मुनलाइट'ले यो अवार्ड जितेको घोषणा गर्‍यो।
कसले जित्ला ओस्कार अवार्ड, बिहान ५:४५ मा प्रत्यक्ष प्रसारण
काठमाडौं, फागुन १५ - सिनेमाजगतको चर्चित अवार्ड ओस्कारको ८९ औं संस्करण सोमबार बिहान नेपाली समयअनुसार पौने ६ बजेदेखि सुरु हुँदैछ। विश्वका १ सय २१ देशले प्रत्यक्ष प्रसारणमार्फत हेर्ने यो अवार्ड क्यालिफोर्नियास्थित लस एञ्जलसको डल्बी नाट्यघरमा आयोजना हुँदैछ। विश्व चर्चित हस्तिहरूको उपस्थितिमा सुरु हुने कार्यक्रममा यसपालि म्युजिकल फिल्म ‘ला ला ल्यान्ड’ले प्रभुत्व जमाउने सम्भावना बलियो छ। किनभने यो फिल्मको १४ विद्यामा मनोनयन परेको छ।
दीपिकाको हलिउड डेब्यू फिल्मले बनायो कमाइमा कीर्तिमान
एजेन्सी - फिल्मले ३१० मिलियन अमेरिकी डलर कमाइ गरेपछि यस्तो रेकर्ड बनेको हो जसको नेपाली रूपयाँ ३३२० करोड हुन आउँछ। फिल्मको यस कमाइमा अमेरिकी घरेलु वक्सअफिसको योगदान १४. २ प्रतिशत रहेको छ।
'आफ्टरम्याथ'मा यसअघि कहिल्यै नदेखिएको रूपमा देखिए आर्नोल्ड
एजेन्सी - 'टर्मिनेटर' फेम आर्नोल्ड स्वाजनेगरको आगामी फिल्म 'आफ्टरम्याथ'को ट्रेलर रिलिज भएको छ। सार्वजनिक भएको फिल्मको ट्रेलरमा आर्नोल्डलाई आजसम्म नदेखिएको बिल्कुले नयाँ अवतारमा देख्न सकिन्छ।
आगामी फिल्मका लागि पुरानै ठाँउमा पुगे 'द रक'
एजेन्सी - फिल्ममा रकले पनि एउटा भूमिकामा अभिनय गर्ने बताइएको छ। उनले गर्ने भूमिकाको बारेमा भने तय हुन बाँकी रहेको छ। रकले आफ्नो ट्वीटरवाट यस वायोपिक फिल्म बनाउन लागेको घोषणा गरेका हुन्।
भारतमा फ्लप ज्याकी च्यानको 'कुङफु योगा'ले कमायो यत्रो पैसा
एजेन्सी, चीन, माघ २६ - चिनियाँ फिल्मका सुपरस्टार ज्याकी च्यान अभिनित इन्डो-चाइना फिल्म 'कुङ फु योगा' भारतमा फ्लप भएको छ। फिल्म भारतमा नचलेपनि फिल्मले चीनमा भने ठूलो मात्रामा पैसा कमाइरहेको खबर सार्वजनिक भएको छ।
माइली साइरसले यसरी गरिन् लक्ष्मी पूजा
एजेन्सी, माघ २५ - गायिका माइली साइरसले लक्ष्मी पूजा गरेकी छन्। उनले लक्ष्मी पूजा गरेको तस्वीर इन्स्टाग्राममा सोमबार पोस्ट गरेकी हुन्। २४ वर्षीय गायिका साइरसले हिन्दु रिवाजअनुसार हलुवा, फलफूल, धुप, दियो राखेर पूजा गरेकी देख्न सकिन्छ।
यी अभिनेत्रीले गरिन् यस्तो खुलासा: मेरो ७ वर्षमा यौनशोषण, १४ वर्षमा बलात्कार
एजेन्सी - हलिउड अभिनेत्री एस्ले जुडले आफू पनि यौन दुर्व्यबहार तथा बलात्कार पीडित भएको खुलासा गरेकी छन्। महिला तथा केटीहरूलाई हुने लैंगिक हिंसा विरूद्धको विश्व कङ्ग्रेसमा बोल्दै जुडले यस्तो खुलासा गरेकी हुन्।
बेनले 'ब्याटम्यान' निर्देशन नगर्ने, अभिनयमात्रै गर्ने
एजेन्सी - यसै साता बेनले आफूले अभिनेता तथा निर्देशकको काम एकसाथ उस्तै स्तरमा गर्न नसक्ने भएकाले यसअघि चर्चामा रहेजस्तो फिल्म निर्देशन नगर्ने बताएका हुन्। फिल्मलाई वार्नर ब्रोसले निर्माण गर्दैछ। फिल्म निर्माण कम्पनीले बेनको यस निर्णयलाई आफ्नो समर्थन रहने जनाइसकेको छ।